LibreAquarium: Tantano amin'ny alàlan'ny lozisialy maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Amin'ny alàlan'ny mailaka ny mpamorona ny FreeAquarium, izay araka ny anarany, dia fampiharana (Rindrambaiko maimaim-poana) ho an'ny fitantanana aquarium.
Raha ny filazan'ny mpamolavola azy (izay miaiky amiko fa tsy manam-pahaizana momba ny fandaharana izy), FreeAquarium manana simulate (Modely Simulation) izay mamela haminavina ny soatoavina NO3, PO4 ary Fe, avy amin'ny tantaran'ny fanadihadiana. Toy izany koa, mamaritra ny mety hisian'ny ahidrano izy io ary mampahafantatra raha mifanaraka amin'ny mponina izay ananantsika ao anaty aquarium ny toetran'ny rano ankehitriny.
Aquarium maimaim-poana novolavolaina miaraka amin'ny Lazarosy, ary noho izany dia endrika marobe izy io, ka afaka mahita isika ny installeranao for Windows, Linux ary Mac. Manasa anao aho hisintona azy ary andramo hahalalanao ny hevitrao momba azy. Amin'izao fotoana izao dia nisy namako nilaza tamiko fa tsy eo izy ireo Goldfish… 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LibreAquarium: Tantano amin'ny alàlan'ny lozisialy maimaim-poana ny aquarium anao
Toa tsara izany, saingy… rpms?
Nampiakariko tamin'ny alàlan'ny fonosana deba ary tsy mandeha izy.
Mizaha toetra azy amin'ny Kubuntu 12.04 (32bits) aho ary miasa.
Ny Carassius auratus dia mipoitra ao amin'ny tahiry amin'ny programa, tsy fantatro izay tondroin'i @elav. Toa tsara ny fandaharana fa mbola tsy azoko ny fomba fampiasana azy.
Pcadav dia hoy izy:
Windousico, manana boky torolàlana ianao ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa. Ny fototry ny karazan-javamaniry (trondro, zavamaniry ary invertebrata) dia ireo izay mamela antsika hifehezana ny mason'ireo karazan-javaboary izay ampidirintsika ao amin'ny aquarium. Rehefa manampy karazana isika dia avela hisafidy aquarium sy karazana iza. Ny karazan-jiro ampidirintsika ao amin'ny aquarium-ko dia hivoaka avy any afovoany afovoany, satria raha tsy ao anaty fotony voalaza dia tsy voafehy ny filany simika.
Ho an'ny ankavanana dia tsy hisy installer sh
Mamaly an'i Pcadav
O, tsy haiko, izany no nolazain'ny namako tamiko, mbola tsy afaka nampidina sy nisedra ity fampiharana ity aho
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara, ary manararaotra mandinika izay kisary azoko aho.
Ao amin'ny LinuxMint 13 KDE aho fa mifandray amin'ny pejy amin'ny alàlan'ny milina virtoaly misy W $ ary miseho ilay kisary W $… liana te hahafantatra fotsiny.
Lojika. Ny masinina virtoaly dia tsy mahalala mihitsy izay rafitra fandehan-javatra iasany. Ho an'ny tanjona rehetra dia mihazakazaka navigateur avy amin'ny winbugs ianao.
Tsy hita ny karazana nefa azo ampiana… tokony hisy tranokala hizara fanavaozana ny karazany.
Misaotra betsaka noho ny fandraisan'anjara, io no notadiaviko, mazava ho azy miaraka amin'ny fahalalàna solosaina kely fa io no fampiharana mety indrindra ho an'iza, tamin'ny voalohany dia nisy tsy fahombiazana nitsambikina noho ny fanairana nomanina tamin'ny 2012 fa hamafana ny zava-drehetra toy ny landy , indray Misaotra betsaka.
Valve dia manome tosika an'i Nvidia ho an'ireo mpamily Linux.